आकस्मिकबाहेकका सेवा अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने चिकित्सक संघको चेतावनी ::Nepali TV
You are here : Home News आकस्मिकबाहेकका सेवा अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने चिकित्सक संघको चेतावनी
नेपाल चिकित्सक संघले डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारले यथाशिघ्र ठोस कदम अगाडि नबढाए आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ।
बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी संघले सो कुराको चेतावनी दिएको हो।
चिकित्साक्षेत्रको सुधारको माग राखी असार १६ गते देखि जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द के.सीका मागहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन संघले आज आकस्मिक सेवा बाहेकका स्वास्थ्य सेवाहरू बन्द गरी माइतीघर मण्डला हुँदै बानेश्वरसम्म र्‍याली निकालेको थियो।
‘संघको तर्फबाट अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्म १ घण्टाको धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन संघका शाखा कार्यालयहरू र देशभरका स्वास्थ्यसंस्थाहरूलाई हार्दिक आह्वान गरिन्छ,’ संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षार्थ यथासिघ्र ठोस कदम अगाडि नबढाइएको खण्डमा आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्न बाध्य हुनेछौं।’